QoorQoor oo halis ugu jira in Xilka laga tuuro
Tuesday February 09, 2021 - 10:13:57 in Wararka by Editor in Chief
Ciidamo ka amar qaata maamulkii Ahlu-Sunna ee xoogga looga saaray Galmudug ayaa Axaddii si buuxda u qabsaday degmada Matabaan ee gobalka Hiiraan. Warar uu helay Waaga-Cusub ayaa sheegaya in ciidanka qabsaday degmada Matabaan ay yihiin ciidankii A
Ciidamo ka amar qaata maamulkii Ahlu-Sunna ee xoogga looga saaray Galmudug ayaa Axaddii si buuxda u qabsaday degmada Matabaan ee gobalka Hiiraan. Warar uu helay Waaga-Cusub ayaa sheegaya in ciidanka qabsaday degmada Matabaan ay yihiin ciidankii Ahlu-Sunna ee lagu daray qeybta 21-aad ee Milateriga Soomaaliya, waxeyna markii hore ka tirsanaayeen Ahlu-Sunna. Degmada Matabaan oo ka tirsan Hiiraan waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku sugnaa ciidamada Ahlu-Sunna waana degmo muhiim ah oo soohdin la leh magaalada Guriceel oo ka tirsan Galgaduud, islamarkaana ka mid ah goobihii lagu aas aasay Ahlu-Sunna.
Qoor Qoor ayaa wajahaya culeys weyn oo dhanka ammaanka ah iyo soo rogaal celinta kooxda Ahlu-Sunna oo ay suurta-gal tahay inay ku wajahan tahay magaalada Guriceel iyo deegaano kale oo ka mid ah Galmudug.